Matte Black4လက်မရေချိုးခန်း Faucet စင်တာ
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW Centerset ရေချိုးခန်းသုံးရေစုပ်စက်နှင့်အတူယိုစီးမှုတပ်ဆင်မှု Matte Black
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.855ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 20 ဖောက်သည် ratings
ရေချိုးခန်းသုံး faucet matte အနက်ရောင် ၂ လက်ကိုင်သည် ၁ နှစ်အတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းကိုပေးထားသည်။ သုံးနှစ်အာမခံချက်ဖြင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချိုးခန်း faucet matte အနက်ရောင်2လက်ကိုင်ယခုစျေးဝယ်!
2321400B installation ကိုညွှန်ကြားချက်
ထူးခြားသော Matte အနက်ရောင်ဒီဇိုင်း
လုံလောက်သောအာကာသပူဇော်ဖို့မြင့်မားသော arc faucet
SKU: 2321400B Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags: ပရိသတျယိုစီး, လက်ကိုင်နှစ်ခု, ရေယာဉ်စုပ် faucet
B က *** မီတာ မတ်လ 26, 2019
လုံးဝဒီ faucet LOVE သင်ဤစျေးနှုန်းကိုမကျော်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
M က *** t ကို2020-03-20
*** s2020-03-22 အမေရိကန်
လှပသောပုတ်။ သူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုပါသည်။ ကြီးမြတ်တန်ဖိုး
, G *** တစ်ဦး2020-03-25
ဤထုတ်ကုန်နှင့်အလွန်ဝမ်းသာပါသည် - ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပါသည်။ ညွှန်ကြားချက်များသည်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်၊ သင်လိုအပ်သည် (အနုတ်ငယ်များ) အထုပ်ထဲတွင်ပါလာပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည်အလွန်လှပသည်။ ငါ spout ပီသသောကိုချစ်!
အီး *** ဃ2020-03-26
ကြီးမြတ်လှ၏, ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်။ နောက်တဖန်ရလိမ့်မယ်
L ကို *** င2020-03-28
F ကို *** ဈ2020-03-28
ငါဒါကိုအမိန့်ပေးပြီးအဲဒီနာရီညမှာနာရီဝက်အတွင်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုခံလိုက်တဲ့အနက်ရောင်ဒီ faucet အနက်ရောင်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
B က *** y က2020-03-29
J ကို *** င2020-04-01
အကြှနျုပျ၏ရေပိုက်သမားဤလက်ကိုင် faucet နှစ်ခုတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အထူးသဖြင့်ရေပူကကောင်းတယ်။ ငါ spout ဆုံလည်သည်ငါကြိုက်တယ်ယခုငါရေချိုးခန်းထဲမှာအမှုအရာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ငါ့မြင့် arc မီးဖိုချောင် faucet ကိုသွားစရာမလို။
J ကို *** ဎ2020-04-02
E ကို *** က x2020-04-04
ငါဒီရေချိုးခန်း faucet နှစ်ခုလက်ကိုင်အလွန်ကြည့်လှပသောကြည့်ရူပီးနှင့်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ကြည့်ကြည့်ကြိုက်တယ်
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရေအတွက်နှင့်ဤ faucet ၏ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း။ အိမ်ရေချိုးခန်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်
အီး *** ဎ2020-04-10
ရေချိုးခန်းမှဂရိတ် update ကို။ ညင်သာသောဒီဇိုင်း၊ မြန်။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ထားသည်။
ပထမတော့ငါ (အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းကြောင့်) အနည်းငယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရေပိုက်ပြင်သမားကကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ ငါက၎င်း၏စျေးနှုန်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်, ကကျိန်းသေစျေးကြီးကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကြီးမြတ်သည်သဘောတူသည်။ အလွန်ဝယ်ဖို့အကြံပြု! !
, G *** ဋ2020-04-15
N ကို *** င2020-04-18
Prefect - ဤရေချိုးခန်း Faucet သည်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးပြီးအရည်အသွေးမြင့်သည်
J ကို *** မီတာ2020-04-20
S က *** ဌ2020-04-25
ဒီ faucet ၏အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုချစ်။ ရေစီးဆင်းသည်။ ငါ faucet ဘက်ခြမ်းသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ကြိုက်တယ်။ ကျိန်းသေနောက်တဖန်မဝယ်ပါလိမ့်မယ်!
ဒီ faucet တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အသွင်အပြင်လည်းအလွန်လှပသည်။ စျေးရောင်း။
တစ် ဦး တည်း Lever ရေချိုးအင်တုံရောနှော Chrome ကိုပုတ်ပါ
WOWOW ၄ လက်မစင်တာတစ်လုံးတည်းသောရေချိုးခန်း F ...